Thank you ဆိုရင် ပြန်ဖြေတတ်ဖို့ လိုသေးပါတယ်... - Myanmar Network
Thank you ဆိုရင် ပြန်ဖြေတတ်ဖို့ လိုသေးပါတယ်...
Posted by Ko Aung on June 23, 2011 at 1:54 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီဆိုဒ်ကို British Council Burma ရဲ့ Marketing and Communications Manager တစ်ဦးက မိတ်ဆက်ခြင်းကြောင့် သိရှိခဲ့ ရပါတယ်။ မကြာသေးခင်က မိမိ ကိုယ်ပိုင် ဆိုဒ်မှာ မပြီးပြတ်သေးတဲ့ ရေးလက်စ အရိုင်းစကား ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဒီဆိုဒ်မှာ ပြန်လည် ဖော်ပြခွင့် တောင်းခံလာတဲ့ အတွက် ဒီဆိုဒ်ရဲ့ တုန့်ပြန်သံတွေကို ကြားချင်တာနဲ့ Facebook ကနေ တဆင့် ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆိုဒ်ကို ဝင်ရောက် လေ့လာကြည့်တဲ့ အခါမှာ ဒီဆိုဒ်က အသင်းဝင်များ အနေနဲ့ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကားကို လေ့လာ နေကြသူများသာ မကဘဲ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူမှုဆက်ဆံရေး ယဉ်ကျေးမှုများကိုလည်း လေ့လာ မှတ်သားနေကြတယ် ဆိုတာကို သတိပြုမိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောနဲ့ ပတ်သက်လို့ မိမိရဲ့ ဗဟုသုတ အကြောင်းလေး တစ်ခုကို ဒီနေရာမှာ မိတ်ဆက် ရေးသား ချင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားကို အသုံးပြု ပြောတဲ့ အခါမှာ သတိတစ်ခု ထားသင့်တာက လူမှုဆက်ဆံရေး ယဉ်ကျေးမှု စံမဝင် ခဲ့ရင် လူမှု ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး အကြား အတိုင်းအတာ တစ်ခု ခြားနေပြီး ကန့်သတ် ဆက်ဆံ ခံရတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အင်္ဂလိပ် စကားကို ပြောတဲ့ အခါ သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို နားလည်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဆိုကြပါစို့၊ မြန်မာမှာ ဆိုရင် ကျေးဇူးတင်ပါလို့ ဆိုခဲ့တဲ့ အခါ၊ ရပါတယ်၊ ကိစ္စ မရှိပါဖူးလို့ ပြန်ဖြေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး အသုံးအနှုံးဖြစ်ပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လို Thank you ဆိုတာကို Never mind လို့ ပြန်ဖြေရင်တော့ ခပ်ရင့်ရင့် ပြန်ပြောသလိုမျိုး ယူဆ စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ Thank you ဆိုရင် You're welcome ဆိုတာမျိုးက ယဉ်ကျေးတဲ့ အသုံးအနှုံး ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပေမဲ့ နေရာတကာ welcome လုပ်လို့လဲ မဖြစ်သေးပါဖူး။ ဥပမာ ကိုယ့်ဆီကနေ ဆေးလိပ် တစ်လိပ် တောင်းသောက်တာမျိုး၊ သူတောင်းစားကနေ ပိုက်ဆံ တောင်းတာမျိုး လုပ်တဲ့ အခါ၊ ကိုယ်က ဆေးလိပ်တိုက်လိုက်ပြီး၊ သို့မဟုတ် သူတောင်းစားကို ဆိုရင်လဲ ငွေအကြွေ ထုတ်ပေးလိုက်ပြီး သူတို့က ကိုယ့်ကို Thank you ဆိုရင်၊ welcome ဆိုလို့ကတော့ နောက်ထပ် ထပ်ပေးပါဦးလို့ တောင်းဖို့ ပြောသလို ဖြစ်နေမှာမို့ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ဆိုရင်တော့ welcome လို့ ပြန်ဖြေတာ သိပ်ဟန်ကြမှာ မဟုတ်ပါဖူး။ သြစတေးလျမှာကတော့ ဒီလို အခြေအနေမျိုးကို ဆိုရင် no worries လို့ ပြန်ပြောလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ you're alright ဆိုပြီး သုံးတာ ကောင်းပါတယ်။
စကားစပ်လို့ ဒီနေရာမှာ အတွေ့အကြုံ တစ်ခု ပြောပြချင်ပါတယ်။ တရက်မှာ မိမိရဲ့ အိမ်ကို မလေးရှားနိုင်ငံသား တစ်ယောက်က ခတ္တလာလည်ပါတယ်။ အပြန်မှာ မိမိက သူ့ကို မိမိအိမ် လာလည်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောတော့ သူက သြစတေးလျမှာ နေတာ ကြာနေပြီမို့လို့ no worries ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို နှုတ်ကျိုးနေလို့လား မသိပါဖူး၊ မိမိကို no worries လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ ကိုယ့်အိမ်ကို လာလည်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုတာကို သူက no worries ဆိုတော့ မိမိကို ခပ်ကြောကြောနဲ့ သူ့ကဘဲ ရသင့်ရထိုက်လို့ ရယူတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ပြန်ဖြေသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ အဲသည်လို နေရာမျိုးမှာဖြင့်apleasure သို့မဟုတ် with my pleasure ဆိုတာမျိုး ပြန်ဖြေ သင့်ပါတယ်။
ဒါကတော့ မိမိ ကြုံတွေ့ သိဖူးတဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေး ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး သုံးစွဲတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး အသုံးအနှုံး အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
258 members like this
Permalink Reply by Ko Myo Zin on June 30, 2011 at 16:28
I totally agree with u on "You're welcome. " ;)
Permalink Reply by Kyi Wai Thaw on June 30, 2011 at 22:05
ကျွန်တော်ကတော့ ၀ဲလ်ကမ်းဆာနဲ့ လုတ်စားနေတာပဲ။ :)
Permalink Reply by ဇနပုဒ်ရွာသား on July 1, 2011 at 3:35
it's ok..It's can use or not please?
Permalink Reply by snake on July 1, 2011 at 10:05
It is good for everybody.
Permalink Reply by Happy on July 1, 2011 at 10:12
Permalink Reply by Thet Thet on July 1, 2011 at 10:19
ွှ့Thank so much ur post,,,
Permalink Reply by marythresa on July 1, 2011 at 10:21
Permalink Reply by K Lwin on July 1, 2011 at 10:29
My Pleasure ဆိုတဲ့ replay လေးကိုတော့ အရမ်းကြိုက်တယ်.. Movie တွေထဲမှာလည်း ခဏခဏ မြင်ဘူးတယ်.. အခုလို တင်ပေးတဲ့လူကို ကျေးဇူးပါပဲဗျာ..
Permalink Reply by 1lgkcp47g1yju on July 1, 2011 at 10:40
ကောင်းတဲ့ Post လေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
Permalink Reply by 2rn0vld3dnvdg on July 1, 2011 at 10:47
Permalink Reply by seth.saw on July 1, 2011 at 10:48
Permalink Reply by 3p92wpzysczkc on July 2, 2011 at 12:30